Ywar Thar Lay (YTU): 10/1/14
အရင်ရက်တွေက မိုးမရွာတာ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲ။ မိုးရေတွေထဲက ဟွေးကို ကြည့်ရတာ လွမ်းစရာအပြည့်။
ဟွေးကနေ နောက်တမြို့ ဟွေအမ်းကို သွားတယ်။ ဒါနံကို ပြန်ဖြတ်ရတာမို့ သွားတဲ့လမ်းမှာ ချမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်ကို ဝင်ပါတယ်။ ချမ်းလူမျိုးတွေကို ကျနော့စိတ်ထဲတော့ ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေလို့ပဲ မှတ်တယ်။ ရေအိုး၊ အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်တွေက အစ တူတယ်။ နောက်ထပ်တူတာ ရှိသေးတာကို မွိုင်ဆမ်းဆိုတဲ့ အရပ်မှာ ပိုသိလာရတယ်။
ပြတိုက်အဆောက်အဦးကို ပြင်သစ်ပုံစံ ဆောက်လုပ်ထားပြီး ၁၉၀၂ခုနှစ်ကနေ နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် တိုးချဲ့ ပြုပြင်ထားတာမို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လှပတဲ့အဆောက်အဦးပါ။ စုဆောင်းထားတဲ့ ချမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အစုစုဟာ ခမ်းနားကြီးကျယ်ပြီး အဆင့်မြင့်မားတဲ့ လူမျိုးစုတခုဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကောင်းသက်သေပြလို့နေတယ်။
ဟိန္ဒူရိုးရာ ဂရုဒါ ငှက်ရုပ်
ဘာသာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့အတူ အနုသုခုမပညာပါ တိုးတက်ထွန်းကားတဲ့ လူမျိုးစုကြီး တစုလို့ ဆိုတာ မငြင်းနိုင်တဲ့ သက်သေတွေပါပဲ။
ပြတိုက်ကနေထွက်လာတဲ့အခါ မာဘယ်လ်ကျောက်တွေကို ထုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကို ပို့ပါတယ်။ ကျောက်သားဖြူဖြူ အရုပ်တွေရယ်၊ တခြားတခြားသော ရောင်စုံ အရုပ်တွေနဲ့ ကျောက်ထုတဲ့ လုပ်ငန်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဟွေအမ်းကို ရောက်တဲ့အခါ မိုးက တဖွဲဖွဲရွာနေပြီ။ ဟိုတယ်က သုံးနာရီမှ ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး နေ့လည်စာကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်စားဖို့ပါ။ စေ့စပ်သေချာတဲ့ ဂိုက်က ကျနော့ကျောပိုးအိတ်ကို ကာဖို့ မိုးကာပလတ်စတစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သူနဲ့ အတူ ထမင်းလိုက်စားမလားလို့ ဖိတ်တော့ အားရဝမ်းသာ လိုက်တာပေါ့။ သူထင်ထားတာ ကိန်းကြီးခမ်းကြီး ထမင်းဆိုင်မှာမှ စားတတ်မယ်လို့ ထင်တာကိုး။ ဒေသခံတွေနဲ့အတူတူ နာမည်ကြီး ကြက်ဆီထမင်းဆိုင်မှာ လိုက်စားတော့ သူလည်း အတော်လေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားတယ်။
စားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ပိုးချည်မျှင် ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဖျော်ဖြေတဲ့နေရာကို လိုက်ပို့တယ်။ ပိုးကောင်လေးတွေကနေ စလို့ ပိုးချည်မျှင်ဆွဲထုတ်တာအပြင် ရက်လုပ်တာအဆုံး အဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျရှင်းပြပေးတယ်။ မေ့အတွက် ပိုးပုဝါအစိမ်းလေးတထည်ဆွဲခဲ့လိုက်တယ်။ ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တာမို့ တံငါသည်နဲ့ ကညာပျိုအကလိုမျိုးကို ဟာသဆန်ဆန်တင်ဆက်တာ တွေ့ရတယ်။ အိမ်လို အဆောက်အဦးထဲမှာပဲ တူရိယာတွေနဲ့ ခင်းကျင်းပြသထားတာပါ။
ဟိုတယ်ကို လိုက်ပို့ပြီးတဲ့အခါ ကားသမားရော ဂိုက်ရော ဒါနံကို ပြန်အိပ်ကြတယ်။ ညပိုင်းအစီအစဉ်ကတော့ ကျနော့ဖာသာ ကျုပ်ကျက်လိဖို့ပါ။ ဟိုတယ်အခန်းက အရမ်းကို ကျယ်လွန်းတယ်။ တကယ့်ကို ကျယ်လွန်းတယ်။
ဟိုတယ်က မြေပုံစာရွက်ကို ကိုင်ပြီး လျှောက်သွားတယ်။ မီးတွေထွန်းထားတာ သီတင်းကျွတ်လိုလို၊ တန်ဆောင်တိုင်လိုလို။ မီးပုံတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး ရောင်းတဲ့မြို့မို့ ညပိုင်း အိမ်တိုင်းဆိုင်တိုင်းဟာ မီးပုံးကိုယ်စီနဲ့ ညခင်းဟာ လှပလို့နေတယ်။
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မြစ်ထဲကိုပါ မီးမျှောပွဲလုပ်ကြသေးတာ။ မီးမျှောဖို့ စက္ကူခွက်လေးတွေနဲ့ ရောင်းနေတဲ့ ကလေးလေးဆီမီးခွက်တွေ အားပေးရင်း သူ့ကိုပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ညနေစာ မစားချင်တာမို့ ကော်ဖီဆိုင်မှာ မုန့်တခု၊ ကော်ဖီတခွက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ။ အေးလာပြီဆိုတော့မှ ဟိုတယ်ပြန်ဖို့ကို သတိရတယ်။ လမ်းတွေ မှတ်မိသလိုလိုနဲ့ မမှတ်မိပြန်ဘူး။ လက်ထဲကမြေပုံကို ကိုင်ပြီး လျှောက်နေရင်း စိတ်ထဲမှာ ဝေးသည်ထက် ဝေးလာတယ်လို့ ထင်တယ်။ ခေါက်ဆွဲဆိုင်သိမ်းနေတဲ့ ဒေသခံနှစ်ယောက်ကို ဟိုတယ်လိပ်စာပြပြီးမေးတဲ့အခါ အမျိုးသားလုပ်သူက သူစက်ဘီးနဲ့ လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဟာ အတော်ဟုတ်ပါလားပေါ့ တယ်လည်း ကူညီတတ်ကြတဲ့ လူမျိုးပဲလို့။ မင်းတို့ အလုပ်ပြတ်နေလိမ့်မယ့်လို့ ပြောတဲ့အခါ ရတယ် ရတယ်တဲ့ မင်းဆယ်ဒေါ်လာပဲပေးဆိုပြီး ပြောပါလေရော။ စိတ်ထဲ မျက်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး နေ,နေ လို့ ငါလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်လို့။
စိတ်တိုတိုနဲ့ ဟိုတယ်ကို ကိုယ့်ဖာသာ မရောက်ရောက်အောင် လျှောက်မယ်ဆိုပြီး သူတို့နေရာကနေ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်....
Posted by ywartharlay-ytu at 3:01 PM0comments Links to this post
ရေမွှေးမြစ်၊ သိမ်းမွေ၊ အန်ကယ်ဟို ပြီးတော့ နှစ်သစ်ကူးည
ကှေးကှေးလေးနဲ့ နှပျနတော အတျောတောငျကွာလို့ စာဖတျသူတှတေောငျ ဒီခရီးစဉျကို မလေ့ောကျရောပေါ့။ သှားခဲ့တဲ့ခရီးတှကေို ရေးတဲ့အခါ ဓါတျပုံတှစေုရ၊ အကွောငျးအရာတှကေို ပွနျဖတျ၊ ခရီးစဉျတှကေို ပွနျစဉျးစားရနဲ့ အတျောလေး နှောငျ့နှေးစတေယျ။ စိတျမအား လူမအား ဖွဈရတဲ့အခါ ခရီးသှားအကွောငျးအရာတှကေို တျောတျောနဲ့ ပွနျမကိုငျဖွဈလို့ပါ…
ဟှေးရဲ့ နောကျဆုံးနမှေ့ာတော့ နာမညျကြျော ရမှေေးမွဈထဲမှာ သင်ျဘောစီးခွငျးပေါ့။ ဂိုကျနဲ့အတူ သင်ျဘောဆိပျကိုဆငျးတယျ။ မွနျမာပွညျနဲ့ အတျောလေးဆငျပါတယျ။ ကနြျောတို့ မကှေး-အထကျမငျးလှ သင်ျဘောခရီးစဉျကို ပွနျသတိရစတေယျ။
သင်ျဘောခရီးစဉျတလြှောကျ မွဈထဲက ဘေးဘယျညာကို ဓါတျပုံတှေ ရိုကျတယျ။ တိုးဂိုကျက အသံတခုပွုတဲ့အခါမှ နောကျကို လှညျ့ကွညျ့မိတယျ။ သင်ျဘောပိုငျရှငျရဲ့ ကလေးဟာ ပနျးခြီကားလေးတှနေဲ့ ကနြော့ကို စြေးရောငျးခငျြလို့ စောငျ့နရှောတယျ။ ကြောငျးတကျသလားလို့ မေးတော့ တကျတယျတဲ့။ ဒါဆို သူတို့ပညာရေး မဆိုးလှဘူးပေါ့။
မွဈထဲမှာ ငါးမြှားသူ၊ ခေါငျးလြှျောသူ၊ လှလှေျောသူတှကေို ဓါတျပုံ ရိုကျဖွဈခဲ့တယျ။
ဗီယကျနမျမှာ အမွငျ့ဆုံး ဘာသာရေး အဆောကျအအုံအဖွဈ ရှိနဆေဲ သိမျးမှေ ဗုဒ်̕ဓဘာသာ ဘုရားကြောငျးဟာ ရမှေေးမွဈရဲ့ မွောကျဖကျကမျးဦးမှာ ရှိတယျ။ မွဈထဲကနေ မွငျ့မားတဲ့ အဆောကျအဦးကို မွငျနရေပွီ။ ကမျးနဖူးက ဘုရားဟာ အရပျရပျက ခရီးသှားတို့ လှမျးမြှျောဖူးခငျြ့စဖှယျ။
၁၆၀၁ခုနှဈမှာ ပထမဆုံးသောငုယငျဘုရငျတညျခဲ့တာ ဖွဈပွီး နတျသမီး ဒါမှမဟုတျ နတျဘုရား တပါးက အဲ့ဒီမွနေရောမှာ ဘုရားတညျဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့တယျ။ တိုကျတှနျးပွီးတာနဲ့ နတျသမီးဟာ မကျြစိရှတေ့ငျကနေ ခကျြခငျြးကှယျပြောကျသှားခဲ့တယျလို့ ယုံကွညျခဲ့ကွတယျ။
စတညျကာစက ရိုးရှငျးစှာ ဆောကျလုပျထားပမေယျ့ နောကျခတျေအဆကျဆကျ ပွုပွငျမှမျးမံမှုတှနေဲ့ ယနမွေ့ငျရတဲ့ ဘုရားကြောငျးပုံစံဖွဈနခေဲ့ပါပွီ။ တိုးဂိုကျက မွဈကမျးကို ကပျပွီးဆောကျထားတဲ့ စညျးရိုးဘောငျပျေါကနေ ရမှေေးမွဈကို ဓါတျပုံရိုကျဖို့၊ ထငျးရှူးပငျကွီးတှနေဲ့ ပဏာရနတေဲ့ ဘုရားကြောငျးကို ဓါတျပုံရိုကျဖို့ တဖှဖှပွောနလေရေဲ့။
ကြောငျးဝနျးတနံတလြားကိုလညျး လြှောကျကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးတာမို့ တိုကျတဲ့လနေုအေးကို ရှူရှိုကျရငျး ကြောငျးဝနျးအနှံ့ လြှောကျကွညျ့နတေုနျးမှာ ကားတစငျးကိုသှားတှတေ့ယျ။ အဲ့ဒီကားရဲ့ နောကျခံဇာတျလမျးဟာ ကွကျသီးထဖှယျစရာ ကောငျးတဲ့ အဖွဈအပကျြကိုပါ တှလေို့ကျရတယျ။
ကားပိုငျရှငျက သငျ့ကှမျဒပျ လို့ ဘှဲ့ရတဲ့ ရဟနျးတပါးရဲ့ကားပါ။ အဲ့ဒီကားကို ဒီဘုရားမှာ သိမျးထားတာဖွဈပွီး အဆိုပါ ရဟနျးရဲ့ နာမညျကြျောဓါတျပုံကို ကနြျော ဟိုတယျရောကျမှ အငျတာနကျထဲမှာ ရှာကွညျ့ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၆၃ ခုနှဈကာလ ဗီယကျနမျ နိုငျငံရဲ့ ဘာသာရေး အခအြေတငျဖွဈကွရာကနေ ဒီရဟနျးက သူ့ဘာသာသာသနာအတှကျ ဓါတျဆီငါးဂါလနျပုံးကို ကိုယျပျေါလောငျးကာ မီးရှို့ဆန်ဒပွခဲ့လိုပါပဲ။ သင်ျကနျးတှေ အသားတှေ တဖွညျးဖွညျးလောငျကြှမျးနတေဲ့အထဲကနေ ကွာပနျးပုံ ဝတျပွုလကျြ သူရဲ့ ဓါတျပုံဟာ ကမ်ဘာတလှားမှာ အတျောကို ကြျောကွားသှားခဲ့တယျ။ တကိုယျလုံးလောငျကြှမျးသှားသညျ့တိုငျ လှုပျခွငျး ရုနျးကနျခွငျး ငိုညညျးခွငျးမရှိတဲ့ သူ့အဖွဈအပကျြက အားလုံးကို တုနျလှုပျသှားစခေဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
အဲ့ဒီအဖွဈအပကျြကို ဂိုကျက အတိုခြုံးပွောသှားပွီး နောကျမှ သခြောရှာဖတျခဲ့တာပါ။ ကြောငျးဝနျးတလြှောကျ တိတျဆိတျငွိမျသကျမှုကတော့ အံ့သွစရာကောငျးလှပါတယျ။
အပွနျကိုတော့ မွဈကွောငျးနဲ့ မဟုတျပဲ ကားနဲ့လာချေါပါတယျ။ နလေ့ညျစာစားသောကျပွီးတဲ့အခါ ညနဖေကျမှာ လြှောကျလညျဖို့ ဆိုကျကလိုလို့ချေါတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာနဲ့ ခြိတျပေးပါတယျ။ ဆိုကျကလိုဆရာက ညနေ ခွောကျနာရီ ဟိုတယျရှမှေ့ာ စောငျ့နမှောဖွဈပွီး ကနြျောသှားခငျြတဲ့ နရောတှကေို မောငျးပို့ပေးဖို့ ဂိုကျက ပွောပေးရှာတယျ။
ရမေိုးခြိုး ညနေ ခွောကျနာရီ မှောငျရီပြိုးခြိနျမှာ ဆိုကျကလိုဆရာနဲ့ ဟှေးညနခေငျး ခရီးကိုဆကျခဲ့တယျ။ အဓိက ရိုကျခငျြတာ ခရမျးရောငျနနျးတျောရဲ့ ညခငျးမီးထှနျးခြိနျပါ။ ဒါပမေယျ့ နနျးတျောကွီးကို အမှောငျခထြားတာမို့ အခှငျ့မသာခဲ့ဘူး။
ရိုးရာအိမျဆိုတဲ့နရောလေးတှေ လိုကျပို့ပေးတယျ။ စြေးရောငျးဖို့ ဦးတညျထားတဲ့ နရောတှဆေို ဝေးဝေးရှောငျတာမို့ ခပျကွာကွာမနဖွေဈခဲ့ဘူး။
အားလုံးထဲကမှ အနျကယျဟိုရဲ့ အိမျအဟောငျးကို ပိုပွီး စိတျဝငျစားပါတယျ။ အနျကယျဟိုဟာ ဟှေးမှာ ကြောငျးတကျခဲ့ပွီး တျောလှနျရေး စိတျဓါတျတှေ အဲ့ဒီအရပျကနေ စတငျမှေးဖှားခဲ့တယျလို့ ဆိုနိုငျတယျ။ အနျကယျဟိုရဲ့ ရိုးစငျးလှတဲ့ ကြေးလကျအိမျကလေးကို ဓါတျပုံအမှတျတရ အမှောငျထဲကနေ မဖွဈဖွဈအောငျ ရိုကျခဲ့ပါတယျ။
အပွနျလမျးမှာတော့ နာမညျကြျော ဖိုလို့ချေါတဲ့ ဗီယကျနမျခေါကျဆှဲကို ဆိုကျကလိုဆရာ အကူအညီနဲ့ လမျးဘေးက ဆိုငျမှာ စားဖွဈခဲ့တယျ။ ဒသေခံတှေ တျောတျောမြားမြား စားနကွေတာ အားရစရာ။ ခေါကျဆှဲနဲ့တငျ မရပျသေးပဲ ဘဲတှေ အကောငျလိုကျကငျနတောကို တခွမျးမွညျးဖို့ ဝယျတာ စလုံးလေးကပျြလောကျပဲ ပေးရတာ။ မကုနျဘူးဗြာ အရှုံးပေးခဲ့ရတယျ။
အဲ့ဒီညက နှဈသဈကူးညမို့ တမွို့လုံး လူတှဟော အပွငျမှာခညျြးထငျတယျ။ ပွငျသဈတှေ ဆောကျခဲ့တဲ့ တံတားကို မီးရောငျတှပွေောငျးပွီး အလှဆငျထားတယျ။ တံတားဒီဖကျကထိပျကနေ ဟိုဖကျထိပျကို ပွီးအောငျလြှောကျတယျ။ ဓါတျပုံရိုကျတယျ။ ခဏလောကျနတေော့ ဟိုတယျကို ပွနျလြှောကျလာခဲ့တယျ.
ဟိုတယျပွနျရောကျတာနဲ့ နောကျနေ့ တခွားမွို့တခုကို ခရီးဆကျမှာမို့ ခရီးဆောငျအိတျပွနျစီရတယျ။ မနကျစောစောပွနျထှကျဖို့အတှကျ စောစောအိပျလိုကျတာပဲ ကောငျးပါတယျ။
မနကျခငျး ဟှေးမွို့က မိုးတဖှဲဖှဲကပြွီး နှုတျဆကျနခေဲ့ပွီ။ နောငျတခြိနျ ပွနျတှကွေ့ဦးစို့လို့………..
Posted by ywartharlay-ytu at 11:43 PM0comments Links to this post
ကြာပန်းတို့၏အရှင်.... ပန်းတို့ပမာ များမကြာ လန်းဖြာစေလိုသည်
ဝေဒနာတို့ ပိန်းကြာဖက်တွင် ရေမတင်သကဲ့သို့ လျှောကျပျောက်ကင်းစေလိုပါသည်
Posted by ywartharlay-ytu at 8:36 AM0comments Links to this post
လိုက်ကာကို ဖယ်၍ ပြတင်းတံခါးကနေ ကြည့်နေမိသည်။ တံခါးချပ်တို့ လေတိုးသည့်အတိုင်း လှုပ်ယမ်းနေသည်ကို ကျော်ပြီး ကြည့်သည်။ ဝေးသွားသော အရာတခုက ဘယ်တော့မှ ပြန်နီးလာနိုင်တော့မည် မဟုတ်…
တောက်ပသော အရောင်တခု မြင်ခဲ့ဖူးသော ရက်တို့ကို တွေးမိသည်။ တောက်ပခြင်းကို နှစ်လိုစွာ ငေးခဲ့ဖူးသည်မှာ အတိအကျ။ အရောင်တို့ ကူးစက်လာသယောင် ခံစားမိတိုင်း သူ ကျနော့ကို အကျွမ်းဝင်လာသည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ တကယ်တမ်းက အရောင်တွေ ကူးစက်မလွယ်သော ကျနော့အဖြစ်ကို မေ့လျော့သူမှာ ကျနော်ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ထိုအခါ တောက်ပခြင်းက ကျနော့အဖြစ်ကို သိသည်ဟု ကျနော်က ထင်နေခဲ့သည်။ တောက်ပခြင်းက ကျနော့ကို ချည်နှောင်လိုသည်ကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် သိလာခဲ့သည်။ သူချည်နှောင်လိုသော အရာက ကျနော့အတောင်တွေဖြစ်နေတာတော့ မကောင်းပါ။
သူနဲ့ ပတ်သက်၍ ဘယ်အရာကိုမှ ချုပ်ကိုင်မထားလိုခဲ့။ သူလင်းလာသော အချိန်မှာကျနော်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သော ကျနော့စိတ်ကိုပဲ ငြိုငြင်နေခဲ့ပါသည်။ ညကြီးအချိန်မတော် သူလင်းလာသောအခါ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကိုပင် မသိကျိုးကျွန်ခဲ့သည်အထိ။ ထိုသို့ မသိကျိုးကျွန်ခဲ့သည်မှာ ကျနော် တယောက်တည်း မဟုတ်ခဲ့ပြန်။
တောက်ပခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးခဲ့ပြီဟု စိတ်ထဲက ရှိသောအခါ ယိမ်းယိုင်နေသော စိတ်ကို တည့်မတ်ရန် ခဲယဉ်းစပြုလာသည်။ အမှီအတွယ်မဲ့ ရပ်နေခဲ့သော်လည်း အလင်းတစဖြင့် ထောက်ကူပြုလိုသည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မျှဝေခြင်းမရှိခဲ့သော ကိုယ့်အစိတ်အပိုင်းများကို မျှဝေချင်လာသည်။ သို့သော် ထိုအစိတ်အပိုင်းများသည် ပူသည်အေးသည်ကို ကိုယ်တိုင်က ထည့်မတွက်ခဲ့ပါ။
တောက်ပခြင်း၏ အရိပ်ကိုသာမြင်ခဲ့ရသည်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မမေ့ခဲ့။ သူ၏ အရိပ်တွေက အရောင်တွေစုံလှသည်လေ။ အရိပ်စစ်ကိုပင် ပြခဲလှသော သူ့ကို အပြစ်တင်ချင်သော်လည်း နားလည်နိုင်ခဲ့သော ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပင် အပြစ်တင်သင့်သည် မဟုတ်ပါလား။
လင်းလိုသည့်အခါ လင်း၍ မှောင်လိုသည့်အခါ မှောင်သွားသည့် ထိုတောက်ပခြင်းကို ကျနော် နားလည်ရန် တဖြည်းဖြည်း ခက်လာပြီဖြစ်သည်။ လူသားဆန်သော ကျနော့အတွက် ကျနော် အလင်းကို အလိုရှိလျက် မရနိုင်ပါသော အလိုမကျခြင်းတွေသာ လက်ဝယ်တွင် ရှိသည်။ အားနာတတ်သော၊ သူများကို အနှောက်အယှက်မပေးလိုသော ကျနော့အတွက် ငြိမ်သက်နေခြင်းသည်သာ အားထုတ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
တောက်ပခြင်းက ကျနော့ကို နားမလည်သလို၊ ကျနော်ကလည်း တောက်ပခြင်းကို နားမလည်ခဲ့သည်မှာ အသေအချာ။ ကျနော် စနစ်တကျ ထုတ်ပိုးသိမ်းဆည်းခဲ့သည်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း နှစ်လိုခြင်းများဖြစ်၍ အချိန်မရွေး ကျနော်ဖွင့်ကြည့်တတ်သည်။ ထိုသို့သော နေ့က ဆိုသော အကြောင်းအရာတို့ဖြင့် ကျနော့ပျော်ရွှင်ခြင်းအိပ်မက်ကို တဖြည်းဖြည်း နိုးထ အသက်ဝင်စေခဲ့သည်။ ကျနော်တတ်နိုင်သည်က သည်မျှသာ.
ပြတင်းပေါက်က ငေးကြည့်နေရင်း မိုးစက်တို့ထိတွေ့လာသည်။ မည်းမှောင်သော အာကာပြင်တခုသက်သက်ကိုပဲ ကျနော် မြင်တွေ့နေရသည်။ မိုးစက်တို့ စိပ်လာသောခါ မျက်နှာပြင်တခုလုံး အေးစက် စိုရွှဲလာချေပြီ။ ကျနော် ပြတင်းပေါက်ကို ပိတ်မထားလိုပါ….
ကျနော်က ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်တယ်။ ခရီးမထွက်ခင် ကျနော် သွားမယ့် နေရာတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ပြီးတော့ ကျနော် ယူဆောင်သွားမယ့် အရာတွေ စသည်စသည်ကို စီကာစဉ်ကာ အမြဲလုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလောက် စီစဉ်ပေမယ့် လွဲမှားသွားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတခုက အခု ဒီစာဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေးနေခဲ့ပါရောလား….
လောလောလတ်လတ်ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးပိတ်ရက်က ကျနော် ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ ကျနော်နဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်အပါအဝင်ပေါ့။ လေဆိပ်ကို ဘယ်လိုဆင်းမယ်၊ ဆုံမှတ်နေရာ အချိန်တွေက အစကျနော်တို့ တိုင်ပင်ထားပြီးသား။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တခုကြောင့် နောက်ကျခဲ့တာကလွဲရင် ကျနော်တို့ အတော်လေး အဆင်ပြေတယ်။
ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့ ခရီးသွားတယောက်ပါလာတာ အတော်လေးတော့ ရီရပါတယ်။ လေဆိပ်မှာ မနက်စာမကျ နေ့လည်စာမရောက်စားခဲ့ပြီးပေမယ့် လေယာဉ် လေထဲတက်တာနဲ့ ဗိုက်ဆာတယ်လို့ အသံထွက်လာပါတော့တယ်။ သွားတဲ့လေကြောင်းလိုင်းက ဖျော်ရည်တွေတိုက်တဲ့လှည်းထွက်လာတဲ့ အခါ ဟယ်ထမင်းမကျွေးဖူးလားလို့ တအံ့တသြမေးလာတဲ့သူ့ကို ကျနော်တို့တွေက စနောက်ရင်း တချိန်လုံးသူ့ခမျာ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ စောင့်ရရှာတယ်။ မျှော်လင့်တကြီးတော့ စောင့်ဟန်မတူပါဘူး အိပ်ပြီးတော့ စောင့်ရှာတာပါ။
တကယ်ထမင်းကြော်နဲ့ ပုဇွန်ကွေးကွေးချစ်စရာလေးတွေကို မြင်ရတဲ့အခါ သူမျက်နှာလည်း လဝန်းကြီးလိုသာ ပါတော့တယ်။ စားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ငြိမ်ပြီးပြန်အိပ်သွားပါရော။
လေဆိပ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်း ဆိုက်ရောက်ပြီး အရာရာဟာ ချောမွေ့ဆဲ။ သက်ဆိုင်ရာ လူဝင်မှုကိုဖြတ်အပြီး ကျနော်တို့ ခရီးဆောင်အိတ်တွေ ယူရမယ့်နေရာကနေ စောင့်နေပေမယ့် တအိတ်မှ ထွက်မလာပါဘူး။ အိတ်မပါတဲ့ သူငယ်ချင်းကို လူဝင်မှုကနေထွက်တဲ့ အပေါက်ဝနားမှာ စောင့်နေခိုင်းတာမို့ သူလည်း တမျှော်မျှော်စောင့်နေရာကနေ ကျနော်တို့ အိတ်ထုတ်တဲ့နေရာကို ရောက်လာတဲ့အထိ အိတ်တွေက ထွက်မလာသေး။
နောက်တော့ အိတ်ယူရမယ့် နေရာကို ပြောင်းသွားတာတွေ့လိုက်တာမို့ ကျနော်တို့တွေ နောက်ကြောင်းပြန်လျှောက်ကြတယ်။ လည်နေတဲ့အိတ်တွေထဲမှာ ကျနော်တို့ အိတ်တွေကို တွေ့လိုက်ရပြီ။ သူငယ်ချင်းအိတ်ကို ချပြီး ကျနော့အိတ်ကိုချတဲ့အခါ ချလိုက်တဲ့အိတ်က သော့မပါတာကို ချက်ချင်းသတိထားမိတာမို့ လေကြောင်းလိုင်းက ကပ်ပေးတဲ့ စတစ်ကာကို ကြည့်ပြန်တယ်။ ကျနော့နာမည် မဟုတ်ပါ။ ပြန်တင်ပေးလိုက်ရင်း စိတ်ထဲမှာ လေးလံမှုကို တပြိုင်နက်ခံစားလိုက်ရတယ်။
လည်နေတဲ့အိတ်တွေ လျော့သွားပေမယ့် အဲ့ဒီအိတ်ဟာ ပိုင်ရှင်မဲ့နေတုန်း။ သေချာပြီဆိုတဲ့ သတိပေးချက်က စိတ်ထဲမှာ လင်းထိန်လို့။ နောက်ဆုံး တခြားလေယာဉ်ရဲ့ အိတ်တွေ ထွက်လာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ Lost & Found ကို အကြောင်းကြားဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။
ထုံးစံအတိုင်း စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများနဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်တမ်း တွေယူအပြီးမှာ ကျနော်နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ သူတို့ အပြန်အလှန်တွေပြောကြတယ်။ ဘယ်လောက်ထိစောင့်ရဦးမယ်မသိတာမို့ အပြင်ဖက်မှာ လာကြိုတဲ့ ကားကို သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ထွက်ပြီး ပြောနှင့်နေကြပြီ။ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သူတို့က ကျန်နေတဲ့အိတ်ဟာ ကျနော့အိတ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ သေချာပါသလားလို့ တယောက်ပြီး တယောက်လာမေးနေကြတုန်း။
ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေလက်စနဲ့ မနက်ဖြန်မနက်အစောကြီး ခရီးထပ်ထွက်မှာမို့ ဒီညနေ အိတ်ရမှဖြစ်မှာဆိုတာကိုပါ ထည့်ရွတ်ပေးနေမိတယ်။ မပူပါနဲ့ လေကြောင်းကနေ ဒီနေ့ညနေ ဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲဖြေတယ်။ ကြိုတဲ့ကားဆီထွက်လာပေမယ့် စိတ်ကတော့ လေဆိပ်မှာ ကပ်ပြီး ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလေဆိပ်မှာ အခုလို ကသောင်းကနင်းဖြစ်တာ ဒါ ဒုတိယအကြိမ်ပါ။ ပထမအကြိမ်က ကျနော့ပိုက်ဆံအိတ်တခုလုံး လာပို့တဲ့ ကားထဲမှာ ကျန်နေရစ်ခဲ့တာ။ လေကြောင်းလိုင်းကို Check_in ဝင်ရင် မှတ်ပုံတင်ကဒ်လိုတာမို့ ကဒ်တွေအားလုံးကလည်းပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ၊ ဘယ်ပြေးရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်တွေးကြည့်ရင် အတော်လေး သနားစရာ။
လေဆိပ်ထဲက အင်ဖော်မေးရှင်း ကောင်တာကနေ ဟိုတယ်ကိုဆက်၊ ဟိုတယ်ကနေ ကားသမားကိုဆက်ပြီး ကားထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တယ်၊ ကားသမားလာပြန်ပေးနေပြီ ကောင်တာဘေးမှာ စောင့်နေပါလို့ အသံကြားရတဲ့အခိုက်ဟာ လှိုက်ခနဲ ပျော်သွားတယ်။ ရိုးသားတဲ့ကားသမားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တော်ရုံတန်ရုံ ကျနော်က လွဲခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့မှာလည်း အလွဲတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီအလွဲတွေက ဒိုင်ယာရီထဲမှာ အများကြီး။ တချို့ကိုတော့ မှတ်မိရဲ့။ တချို့ကတော့ မေ့ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ အခုအလွဲလေးကိုတော့ မမေ့ခင်လေး အမှတ်တရ တို့ထားချင်တာ သက်သက်ပါ….
စာကြွင်း။ ။အိတ်မှားတဲ့သူက ဟိုတယ်ကို သူကိုယ်တိုင်လာပေးပါတယ်။ အိတ်က သော့ကိုဖျက်ထားတာကလွဲရင် ပစ္စည်းအားလုံး ပြန်ရတယ်။ အပြန်ခရီးမှာ သူနဲ့ တချိန်တည်းဖြစ်နေတာမို့ သူ့ကို ကျနော့အိတ်မှာ သော့ချိတ်ထားကြောင်း ပြတော့ လိုက်ပို့တဲ့ သူ့အမေက သူ့သားအိတ်မှာ နာမည်တွေ ပတ်ပတ်လည် ရေးထားလိုက်ပြီဆိုတာ ကျနော့ကို ပြန်ပြရင်း ကျနော်တို့ အားလုံး အတူတူ ရယ်ဖြစ်ကြတယ်။
Posted by ywartharlay-ytu at 1:52 PM0comments Links to this post
ရေမွှေးမြစ်၊ သိမ်းမွေ၊ အန်ကယ်ဟို ပြီးတော့ နှစ်သစ်ကူ...